Oge Dijitalụ Na-agbanwe Agbanwe Ihe Niile | Martech Zone
Mgbe m na-agwa ndị ọrụ na-eto eto okwu ugbu a, ọ na-awụ akpata oyi n’echiche na ha anaghị echeta oge anyị na-enweghị Internetntanetị. Ọbụna ụfọdụ anaghị echeta oge na-enweghị ekwentị. Echiche ha banyere teknụzụ bụ na ọ na-aga n'ihu n'ihu. Anyị na-na na nwere ọtụtụ iri afọ nke oge m ndụ ebe technology ọganihu biri… ma nke ahụ bụ agaghịkwa ikpe.
M na-echeta o doro anya na-arụ ọrụ na 1 afọ, 5 afọ na 10 afọ amụma maka ulo oru m na-arụ ọrụ na. Ugbu a, azụmaahịa na-enwe oge siri ike ịhụ ihe na-eme n'izu na-abịa - agaghị eche n'afọ ọzọ. Na oghere teknụzụ ahịa, ọganihu dị ịtụnanya na-aga n'ihu na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ngwaọrụ kọmputa, data buru ibu, ma ọ bụ naanị njikọta na njikọta. Ihe niile na-agagharị na ụlọ ọrụ ndị na-enweghị obi ike ịgbanwe ga-ahapụ ngwa ngwa.
Otu ihe atụ pụtara ìhè bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Akwụkwọ akụkọ, vidiyo na ụlọ ọrụ egwu niile agbaala mbọ ịghọta na ndị ahịa ma ọ bụ azụmaahịa nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ọ chọrọ na ntanetị, ma yikarịrị ka ha ga-enweta obere ma ọ bụ enweghị ego n'ihi na mmadụ dị njikere inye ya obere. Iwu monolithic na alaeze ukwu nke ewuru enweghi ike ijigide akụ ha. Ma ebe ọ bụ na ha enweghị ọhụụ itinye ego na oge dijitalụ, akụ na ụba abanyela. mgbe ina amụbawo n'ezie!
Ọ gwụbeghị, n'agbanyeghị. Anyị anaghị ekerịta ihe ọmụma teknụzụ, mana m kwenyere na eto eto nke ihe omuma a sitere Needa Shredders na-egosipụta ụfọdụ ọganihu ndị kwesịrị imetụta ọhụụ gị banyere otu azụmahịa gị ga-esi rụọ ọrụ n'ọdịnihu. Ma n'ezie, nke ahụ ga-enwe mmetụta na mbọ ahịa gị.
Tags: Ntinye 3dnchịkọta dị eluamụma azụmahịandi isi datandị isi ndị ọrụ dijitalụahịa Mgbakọígwé ojii MgbakọMgbakọ n'ebe niilegburugburu-ọgaranya usorodaryl plummerinfographicakụrụngwainternet nke ihenyocha a na-adịghị ahụ anyamkpaihe mkpuchi mkpanchịkọta gbasara ịgbasanchebe dabere n'ihe egwurobotsnchebe onweigwe igwengwanrọ akọwapụtara ngwanrọịntanetị nke iheweb-ọnụ ọgụgụ IT
Disemba 11, 2014 na 11:19 mgbede
Infographic dị mma !!!
Azịza nke amaokwu amụma dị egwu. !!!!
Ee, n'ọdịnihu, ọnụ ahịa ahịa dijitalụ ga-ebelata ma asọmpi na-aga n'ihu.